ဆေးပညာ - ဆေးပညာ. ဆေးပညာဆိုသည်မှာ ကုသခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သ
ဆေးပညာ - ဆေးပညာ. ဆေးပညာဆိုသည်မှာ ကုသခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သိပ္ပံပညာသာ မက အနုပညာတစ်မျိုးဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဆေးပညာတွင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဖြင့် လူသားတ ..
ဆေးပညာဘွဲ့ သည် ဆေးကုသခြင်းနှင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း စသည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘာသာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးပြီးနောက် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သည့်အခါ ဆေးကျောင်းများမှ ပေးအပ်သော ဘွဲ့အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးသော တိုင်းပြည်များတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery ဟု ခေါ်ပြီး လက်တင်ဘာသာ Medicinae Baccalaureus Chirurgiae မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုကောက် MBBS, MB ChB, MB BCh, MB BChir, BM BCh, BMBS စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြပြီး မြန်မာပြည်တွင် MBBS ဟု ခေါ်သည်။ စင်စစ် ဤဘွဲ့သည် အ ...
ဒေါက်တာ သည် ကို မြန်မာဘာသာသို့ အသံဖလှယ်ပြီး မွေးစားထားခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးပညာဘွဲ့ ရ ဆရာဝန် ၊ သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့ ရ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ ရ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့ ရ ပညာရှင်များ၏ အမည်ရှေ့တွင် ဂုဏ်ပုဒ်စကားလုံးဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော စကားလုံးဖြစ်သည်။
ဆရာဝန်များ၏ အဓိဋ္ဌာန်ပြု ကတိသစ္စာ ကမ္ဘာ တစ်လွှားကျော်ကြားထင်ရှားခဲ့သောသမားဟူးရားကြီးများအား သက်သေထား၍ ကျွန်ုပ်သည် ဤအဓိဋ္ဌာန်ပြု ကတိသစ္စာကို ရွတ်ဆိုသစ္စာပြုပါအံ့ ၁။ ကျွန်ုပ်သည် လူသားအားလုံးတို့၏ ကိုယ်၏ ကျန်းမာရေး၊ စိတ်၏ချမ်းသာရေးကို ကျွန်ုပ်၏ အရေးကဲ့သို့ ယူဆပါအံ့။ ၂။ ကျွန်ုပ်သည် ဆေးပညာသင်ကြားပေးသော ဆရာသမားများအား မိဘသဖွယ်ရိုသေ လေးစားပါအံ့။ ၃။ ကျွန်ုပ်သည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆေးပညာရှင်များကို ညီရင်းအစ်ကိုမောင်ရင်းနှမကဲ့သို့ လေးစားစွာ ဆက်ဆံပါအံ့။ ၄။ ကျွန်ုပ်သည် သမားကောင်းတစ်ဦး၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် မွန်မြတ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခါ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းပါအံ့။ ၅။ ကျွန်ုပ်သည် ဆည်းပူးတတ်မြောက်ထားသောဆေးပညာဖြင့် ...
သလိပ် ဆိုသည်မှာ ချောင်းဆိုးလိုက်သည့်အခါ လေပြွန်တွင်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် ပျစ်ခဲသည့် အကျိအချွဲ ဖြစ်သည်။ ဆေးပညာတွင် သလိပ်နမူနာကို မျက်စိဖြင့်ကြည့်ကာ အကြမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ပါမောက္ခ ရော်နယ်ဟာဒင် သည် ဆေးပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းနှင့် သင်ကြားမှု/သင်ယူမှု နယ်ပယ်များတွင် နည်းလမ်းသစ်များစွာကို တီထွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆေးပညာသင်ကြားရေးဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခဟာဒင်သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ ဂလပ်စဂိုမြို့ ဆေးကျောင်းမှ ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး ဆေးပညာသင်ကြားရေးဘာသာရပ် နယ်ပယ်သို့ အချိန်ပြည့်မဝင်ရောက်မီက ဟော်မုန်းဗေဒ ဆရာဝန်တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Centre for Medical Education, University of Dundee ဌာနတွင် ပါမောက္ခနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဆေးပညာသင်ကြားရေး ပညာရပ်ဂျာနယ်တစ်ခုဖ ...
မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်ရှိ တန်ခိုးကြီး ဘုရားများသို့ ရောက်ဖူးသူ တိုင်းပင် တန်ဆောင်းပြသာဒ်များတွင်လည်းကောင်း၊ ဘုရား ပလ္လင်တော်နှင့် ဂန္ဓကုဋိနံရံများတွင်လည်းကောင်း အရောင် အမျိုးမျိုးရှိသည့် ဖန်စမှန်စတို့ဖြင့် စီချယ်ထားသည်ကို တွေ့မြင် ကြရပေလိမ့်မည်။ ဤသို့ မှန်ကျောက်တို့ဖြင့် စီမံချယ်လှယ် ခြင်းကို ရှေးမြန်မာဘုရင်များ၏ နန်းတော်များနှင့် ဘုရား၊ ကျောင်းစသော သာသနိက အဆောက်အအုံများ၌ အထူးပြုလုပ် ခဲ့ကြလေသည်။ အနောက်တိုင်းများမှာမူကား မှန်ကိုသာမက အခြား အုတ်၊ ကျောက်ရောင်စုံများဖြင့် အဂ‡တေများ ပေါ်တွင် ပုံပန်းသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးဖြစ်အောင် ပုံဖော်သွင်းမြှုပ်၍ မွမ်းမံ ချယ်လှယ်ခဲ့ကြ လေသည်။ ဤမှန်စီကျောက်စီ ပညာသည ...
မျက်စိနာခြင်း ဆိုသည်မှာ Conjunctiva ဟုခေါ်သည့် မျက်စိ၏ အပေါ်ဆုံးအလွှာ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးပညာအရ Conjunctivitis ဟုခေါ်သည်။ မျက်စိနာခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ကူးစက်ရောဂါပိုးများကြောင့် အဖြစ်များပြီး ဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ကြသည်။
သမားတော်ဟူရာ၌ သမားဟူသောအမည်သည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော အမည် ဖြစ်၏။ သက်ဆိုင်ပုံအား အလုပ်သမား၊ လက်သမား ဇာတ်သမား၊လယ်သမားစသည်တို့ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် အခြား အမည်များမှာ သမား၏ရှေ့ကလုပ်ငန်းကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်သော အလုပ် လက် ဇာတ် လယ်ဟူသော အမည်များနှင့်တွဲဖက်၍ သုံးစွဲမှ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသည်။ ဆေးသမားအမည်မှာကား သမား၏ရှေ့က လုပ်ငန်းကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်သော ဆေးဟူသော အမည် နှင့်တွဲဖက်၍သုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ၊ မသုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသည်။ ဆေးသမားဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို လူတိုင်း သိနိုင်၏ဟုဆိုလိုသည်။ တော်ဟူသောစကားမှာလည်း အရှင်သခင်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ ရိုသေလေးမြတ်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ် အမည်နှင့် ရိုသေလေးမြတ်အပ်သော အရာဝတ္ထုတို့ အမည်၏နော ...
ဘိန်းသည် ဘိန်းသီးမှ ရရှိသော အဆီဖြစ်သည်။ ဘိန်းပင်မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ကုန်လောက်တွင် ပန်းများ ပွင့်၍ မိုးမကျမီ အသီးများကောင်းစွာ ကြီးရင့်ကြသည်။ ဘိန်းပင်သည် ပန်းပင်အရွယ် အပင်ငယ်ကလေးများ ဖြစ်သည်။ ပန်းပွင့်များမှာ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ၍ အသီးများမှာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ဘိန်းပင်သည် စွတ်စိုသော ရာသီဥတုကို ခံနိုင်ရည်မရှိသည့်အတွက် ဘိန်းသီးများမှ ဘိန်းဆီကို မိုးမကျမီ ထုတ်ယူကြရသည်။ ဘိန်းဆီ ထုတ်ယူပုံမှာ ဘိန်းသီးများ၏ အခွံပေါ်၌ ခြစ်ကြောင်းကလေးများ ပြုလုပ်ပေးရ၍၊ ထိုခြစ်ကြောင်းများမှ ထွက်လာသော ပန်းရောင်ဖြစ်သည့် စေးကပ်ကပ် အဆီကို သိမ်းဆည်းယူရသည်။ ဘိန်းခင်း အလုပ် သမားတို့သည် ၂ ရက်ခြား ၃ ရက်ခြားတစ်ခါ ပင်တိုင်းစေ့ လိုက်ပြီးလျှ ...
ပါးချိုင့်ပါသူများသည် ရယ်လိုက်သည့်အခါ သူတို့၏ ပါးချိုင့်လေးများ ပေါ်လာတတ်ပြီး အလှအပတစ်ခုအဖြစ် ထင်ပေါ်စေသည်။ ပါးချိုင့်ရှိခြင်း မရှိခြင်းသည် မျိုးရိုးဗီဇနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ လူအချို့တွင် ပါးချိုင့်တစ်ဖက်တည်းသာ ပါရှိနေတတ်ပြီး အနည်းစုမှာသာ ပါးပြင်နှစ်ဖက်လုံးမှာ ပါးချိုင့်ပါရှိနေတတ်သည်။ ပါးချိုင့်ရှိနေခြင်းသည် ဆေးပညာသဘောအရ မျိုးဗီဇချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သန္ဓေသားလောင်း၏ အစောပိုင်းအဆင့်မှာ မျိုးဗီဇဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မမှန်ခဲ့သောကြောင့် ပါးပြင်တွင် အချိုင့်လေးတွေ ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းသို့ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဝေဖတ်ဟောပြထားသော ဉာဏ်တို့ကို အတိုချုံးရသော် လောကီဉာဏ်, လောကုတ္တရာဉာဏ်ဟူ၍ ၂-မျိုးသာ ဖြစ်သည်။ ထိုတွင် ဉာဏသမ္ပယုတ် ကာမကုသိုလ်, ဝိပါက်ကြိယာစိတ် ၁၂ပါး, မဟဂ္ဂုတ်ဈာန်စိတ် ၂၇ပါး ဟူသော လောကီဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် ၃၉-ပါး၌ ယှဉ်သော ဉာဏ်ကို" လောကီဉာဏ်”ဟု ခေါ်၍ လောကုတ္တရာ မဂ်စိတ်၄-ပါး ဖိုလ်စိတ်၄-ပါး၌ ယှဉ်သော ဉာဏ်ကို" လောကုတ္တရာဉာဏ်”ဟု ခေါ်ဆိုလေသည် အဘိ၊ဝိ။ ၃၃၄။ ဥဒါန၊ဋ္ဌ။ ၆၃၊၂၁၁။ လောကီဉာဏ်သည် သင်္ခါရ, ဝိကာရ, လက္ခဏ, နိဗ္ဗာန်, ပညတ်ဟူသော သိဖွယ်" ဉေယျ” တရားအားလုံးကို အာရုံပြုသောအားဖြင့် ထိုက်သည်အားလျော်စွာ သိမြင် နိုင်သည်၊ လောကုတ္တရာဉာဏ်ကား နိဗ္ဗာန်ဟူသော နိရောဓသစ္စာသိဖွယ်" ဉေယျ” တရား တပါး ...
ဆေးပညာဆိုသည်မှာ ကုသခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သိပ္ပံပညာသာ မက အနုပညာတစ်မျိုးဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဆေးပညာတွင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်သိမ်းရန် သို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် အတွက် အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်နေသည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွင် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ ၊ ဇီဝဆေးပညာ သုတေသတန နှင့် ကျန်းမာရေး နည်းပညာတို့ကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆေးပေးခြင်း၊ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် အခြားကုသနည်းလမ်းများဖြင့် ထိခိုက်မှုနှင့် ရောဂါတို့ကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ ဆေးပညာ၏ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ medicine သည် လက်တင်ဘာသာစကား ars medicina မှ ဆင်းသက်လာပြီး ကုသခြင်း အနုပညာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် လက်တွေ့ကုသရေးတွင် ကျွမ်းကျင်မှု တို့မှာ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏ ကျောရိုးများဖြစ်သော်လည်း တကယ်တမ်း အောင်မြင်စွာကုသနိုင်ရေးအတွက်မူ လူနာနှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်၍ သာမန်လူသားတို့၏ ခံစားမှုနှင့် အရေးတယူဂရုစိုက်မှု အစရှိသောအရာများကို ပြသရန်လိုပြီး အင်္ဂလိပ်တွင် "bedside manner"ဟုခေါ်ကြသည်။
သမိုင်းမတိုင်မီက ဆေးပညာတွင် သစ်ပင်များထွက်ပစ္စည်းအသုံးပြုကုထုံးများ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုကုထုံးများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် ထိုအရာများကို ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ဘုန်းကြီးများ၊ ရှားမင်းများ၊ ဆေးသမားများက မျက်လှည့်ဆန်သော အရာဝတ္ထုများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လူသိများထင်ရှားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများမှာ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုများတွင် ဝိဉာဉ်ကိန်းအောင်းနေသည် ဟူသော အယူအဆ၊ ကွယ်လွန်ပြီးဘိုးဘွားတို့၏ဝိဉာဉ်ဖြင့် နတ်ဘုရားများ ဘာသာတရားများကို တိုင်တည်ကုသခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီအား လျှို့ဝှက်သောစွမ်းအားများကို အသုံးပြုကုသခြင်းနှင့် ထူးဆန်းသောနည်းဖြင့် အမှန်တရားကိုရယူခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဆေးပညာနှင့်ဆက်စပ်သော မနုဿဗေဒပညာ သည် သမိုင်းမတိုင်မီက ရှိခဲ့သော အမျိုးမျိုးသော ဆေးကုသမှုစနစ်များနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ဆက်နွယ်နေမှု ကိုလေ့လာသော ပညာဖြစ်သည်။
ဆေးပညာနှင့်ဆိုင်သော ရှေးဦးပိုင်းမှတ်တမ်းများကို အိန္ဒိယတိုက်တွင် ရှိသော အာယုဗေဒ ဆေးပညာ၊ ရှေးခေတ် အီဂျစ်ဆေးပညာ၊ တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ၊ အမေရိကား နှင့် ရှေးခေတ်ဂရိဆေးပညာတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ဆေးပညာ၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်သော ဟစ်ပိုကရေးတီး Hippocrates သည် ကျိုးကြောင်းဆက်စပ် တွေးခေါ်မှုနှင့်ဆိုင်သော နောက်ပိုင်းခေတ် ဆေးပညာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ချခဲ့ကြသည်။ ဟစ်ပိုကရေးတီးသည် ဆရာဝန်များ လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျမ်းကျိန်လွှာ ဟစ်ပိုကရေးတစ် အုတ်သ်Hippocratic Oath ကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုကျမ်းကျိန်လွှာကို ယခုတိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဟစ်ပိုကရေးတီးသည် ရောဂါများကို acute, chronic, epidemic & endemic ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲခဲ့သည့် ပထမဆုံးလူ ဖြစ်ပြီး ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်များဖြစ်သည့် "exacerbation, relapse, resolution, crisis, paroxysm, peak, and convalescence"တို့ကို သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဂရိသမားတော် ဂေလင် Galen သည် ရှေးခေတ်ဆေးပညာလောက၏ ကြီးကြယ်သော ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ မျက်စိခွဲစိတ်ခြင်းတို့ အပါအဝင် ခွဲစိတ်ခြင်း မြောက်များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၇၅၀ CE နောက်ပိုင်းတွင် မူစလင်အာရပ်တို့သည် ဟစ်ပိုကရေးတီး၊ ဂေလင်၊ ဆပ်ရှလျူးတာ Sushruta တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အာရေဗျ ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး၊ အစ်စလမ် သမားတော်များသည် ဆေးပညာသုတေသန လုပ်ငန်းများကို သိသိသာသာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အစ်စလမ် ဆေးပညာလောက၏ ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်သူ ပညာရှင် အစ်ဘင်စီနာ Avicenna ကိုလည်း အင်လတတ် Imhotep နှင့် ဟစ်ပိုကရေးတီး နည်းတူ ဆေးပညာ၏ ဖခင်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ သူ၏ The Canon of Medicine မှာ ဆေးပညာ အမိုင်းတလျောက် အ‌‌ေကျာ်ကြားဆုံးသော စာအုပ်များအနက်မှ တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ရေးဇစ်စ် Rhazes သည် အလယ်ခေတ် အနောက်ပိုင်း နှင့် အစ်စလမ် ဆေးပညာ medieval Western & medieval Islamic Medicine တွင် နာမည်ကြီးနေသော ဂရိတို့၏ Humorism သီအိုရီကို မမှန်ကြောင်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ဝက်သက် measles နှင့် ကျောက်ရောဂါ small pox ကို ပထမဆုံး အမျိုးအစားခွဲခဲ့သည့်သူ ဖြစ်သည်။ အစ်စလမ်တို့၏ ဘီအမ်ရတ်ဆတန် Bimarestan ဆေးရုံများမှာ အစောဆုံး ပြည်သူ့ဆေးရုံများ ဖြစ်သည်။
အာရပ်တို့ ဆေးပညာ ထွန်းပေါက်ခဲ့သော်လည်း ၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစုတွင် ဖြစ်ပွားသည့် မဲသေရောဂါ Black Death ကြောင့် ဥရောပကဲ့သို့ပင် အရှေ့အလည်ပိုင်းတွင် သေကြေမှုများစွာ ရှိခဲ့သည်။ အချို့က ဥရောပ ဆေးပညာသည် ပလိပ်ကပ်ရောဂါကို ကုသရာတွင် ပိုသာသည်ဟု ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာခေတ် အစောပိုင်းတွင် ဆေးပညာနှင့် ခန္ဒာဗေဒ ပညာရှင်များဖြစ်သည့် ဂါဘလီရေ ဖလိုပီရို Gabriele Falloppio နှင့် ဝီလီယံ ဟာဗီ William Harvey တို့သည် ဥရောပမှ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။
၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစု ပလိပ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဆေးပညာ အတွေးခေါ်များမှာ ယခင် ရှေးရိုးစွဲ ယူဆမှုများမှ သိပ္ပံနည်းကျ ဆေးပညာဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ "ယခင်က ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတို့က မှန်သည်ဟု ပြောသည့်အတွက် မှန်သည်။ ထိုသူတို့ ပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ ပြောသည်မှ သွေဖီခဲ့ပါက မှားယွင်းသည်"ဟူသော ရှေးယူဆချက်များကို ငြင်းပယ်လာကြသည်။ ဗက်စလီးရက်စ် Vesalius ကဲ့သို့ သမားတော်များကလဲ အရင်က မှားယွင်းသော ယူဆချက်များကို မှန်ကန်အောင်၊ အချို့ယူဆချက်တို့ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အန်ဒရေးယက် ဗက်စလီးရက်စ် Andreas Vesalius သည် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့သော ခန္ဒာဗေဒစာအုပ်, De humani corporis fabrica, ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ပြင်သစ် ခွဲစိတ်ပညာရှင် အွန်ပရော့စ် ပါလီ Ambroise Paré ကို ခွဲစိတ်ပညာရပ်၏ ဖခင်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ၁၆၇၆ တွင် အန်တိုနီ ဖှန် လူဝင်ဟွတ် Antonie van Leeuwenhoek က ဘက်တီးရီးယားနှင့် ပိုးမွားငယ်များကို အနုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး microbiology ဘာသာရပ်ကို စတင်ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ ၁၆၂၈ ခုနှစ်တွင် ဝီလီယံ ဟာဗီ William Harvey မှ သွေးလည့်ပတ်မှုစနစ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို အက်ဝေါ့ ဂျန်နာ Edward Jenner က ၁၈ ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိပြီးနောက် သိပ္ပံနည်းကျသော ခေတ်သစ်ဆေးပညာက လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ကူးစက်ပျှံပွားပုံကို ၁၈၈၀ တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၈၉၀ ခုနှစ်တွင် ပိုးသတ်ဆေးကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တိုးတက်လာသည့်အလျောက် ကုသရာတွင်လည်း ယခင် ဆေးမြစ်၊ ဆေးဥ၊ ဆေးပင်၊ တိရစ္ဆာန်၊ လူတို့၏ ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အရည်များကို အသုံးပြုရာမှ ဆေးဝါးများကို ပြုလုပ်ပြီး သုံးစွဲလာကြသည်။ ဆေးဝါးအများစုကို ဆေးမြစ်များ၊ ဆေးပင်များမှ ပြုလုပ်ကြသည်။ အက်ဝေါ့ ဂျန်နာ Edward Jenner နှင့် လူးဝစ် ပတ်စ်တိုး Louis Pasteur မှ ကာကွယ်ဆေးကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် အဆိပ်ရှိသော ဆိုးဆေးများကို ဘက်တီးရီးယားများက စုပ်ယူပြီး၊ လူ့ခန္ဒာဆဲလ်များက စုပ်ယူခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိပြီး ပထမဆုံး ပိုးသတ်ဆေး Arsphenamin ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ပိုးသတ်ဆေး အုပ်စုမှာ ဆာဖာလ် Sulfa ဆေးအုပ်စု ဖြစ်သည်။
ဆေးဝါးပညာရပ်မှာလည်း ပိုမို ရှုပ်ထွေးနက်နဲလာပြီး လူ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ဦးတည်သော ဆေးဝါးများကို ခေတ်သစ်နည်းပညာများဖြင့် ဖော်ထုတ်လာကြသည်။ ဆေးဝါးများ၏ မကောင်းသည့် အာနိသင်ကိုလဲ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ပြုလုပ်လာကြသည်။ လူသားမျိုးရိုးဗီဇ Human Genetics အကြောင်းကို သိရှိလာပြီး ဗီဇ Gene မကောင်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာသော ရောဂါများ Genetic Disorders ကိုလဲ သိရှိလာသည်။ အဖြစ်များသော Genetic Disorders များ၏ မကောင်းသော Gene များကိုလဲ သိရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး Genetics နည်းပညာနှင့် Molecular Biology နည်းပညာမှာ ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွင် အလွန်အရေးပါလာသည်။
ဆေးပညာယူဆချက်များမှာလည်း အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံသည့် ဆေးပညာ Evidence-based Medicine အဖြစ် ကူးပြောင်းလာပြီး၊ တကမ္ဘာလုံးတလျောက် အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း တို့ဖြင့် ဆေးပညာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
2. လက်တွေ့အသုံးချ ဆေးပညာ
ဆေးပညာကို အသုံးပြုပြီး ဆရာဝန် တစ်ဦးသည် လူနာ၏ ရောဂါကို ရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင်. ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရန် ကာကွယ်ခြင်းတို.ကို လုပ်ဆောင်သည်။ များသောအားဖြင်. ဆရာဝန်မှ လူနာအား မိတ်ဆက်ခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင်. ဆရာဝန်-လူနာ ဆက်ဆံရေးကို စတင်ပြီး ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးမြန်းခြင်း၊ လူနာအား စမ်းသပ်ခြင်း၊ လူနာမှတ်တမ်းရေးခြင်းတို.ကို ပြုလုပ်သည်။ လူနာကို စမ်းသပ်ရာတွင် နားကြပ် stethoscope, အာရုံကြော တုန်.ပြန်မှုကို စမ်းသပ်ရန် ပလက်စတစ်တူအသေးစား Reflex Hammer၊ သာမိုမီတာ Thermometer၊ ဓာတ်မီး အစရှိသည်. ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ လူနာခံစားရသော လက္ခဏာများ symptoms၊ လူနာကို စမ်းသပ်ပြီး တွေ.ရှိချက်များ signs ကို မှတ်သားပြီးနောက် လိုအပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုများ သွေး၊ ဆီး၊ ဝမ်း၊ အစရှိသည် ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသားစယူ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းပို. စစ်ဆေးစေခြင်း၊ ဆေးပေးခြင်း၊ အခြားကုသနည်းများဖြင်. ကုသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေလိမ်.မည်။ မေးမြန်း၊ စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးခြင်းမှ ရရှိလာသော အချက်များကို မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရောဂါများကို သတ်မှတ်ရလေသည်။ လူနာအား သိသင်.သိထိုက်သော အချက်အလက်များကို ရှင်းပြခြင်းဖြင်. ဆရာဝန်-လူနာ ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲအောင်၊ လူနာ ယုံကြည်ကိုးစားလာအောင် ဆောင်ရွက်ရပေသည်။ စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးတွေ.ရှိချက်များ၊ ကုသချက်များ အားလုံးကိုလဲ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင်. ထားရှိရပြီး နောင်လိုအပ်ချိန် သို.မဟုတ် တရားရင်ဆိုင်ချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူနာကို တကြိမ်တခါထဲနဲ. ကုသရုံသာမက လိုအပ်သလို ရက်ချိန်းပေးပြီး အခြေအနေ ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရပေသည်။ ရက်ချိန်းပြန်ပြရာတွင် စမ်းသပ်မှုများမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကဲ.သို. အချိန်မကြာပေ။
လူနာ၏ ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးမြန်းရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်။
Chief Complaint cc: လူနာ ဆေးရုံ သို.မဟုတ် ဆေးခန်းကို လာရောက်ရသည်. အဓိက အကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။ လူနာပြောသော စကားလုံးအတိုင်း မှတ်သားလေ.ရှိပြီး လက္ခဏာခံစားရသည်. အချိန်ပမာဏပါ ထည်.သွင်း မှတ်သားသည်။ ဥပမာ - ၂ နာရီကြာ ဗိုက်အောင်.ခြင်း.
History of Present Illness HOPI – လူနာ ခံစားရသည်. လက္ခဏာများကို စတင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှ အစပြုပြီး မေးသားရသည်။ လိုအပ်သော အကြောင်းအရာများကို ထည်.သွင်း မေးမြန်းရသည်။ ဥပမာ - လွန်ခဲ.သော ၂ နာရီက ထမင်းစားတယ်။ ထမင်းစားပြီး ဗိုက်အောင်.လာတယ်။ ရင်ခေါင်းကနေ ပူပြီး အောင်.တယ်။ လှဲလို.လဲ မသက်သာ၊ ထိုင်လို.လဲ မသက်သာ ဖြစ်နေတယ်။ လေဆေးစားကြည်.ပေမဲ. မထူးခြားဘူး။ အန်တော. မအန်ဘူး။.
Medications Rx – လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ အနောက်တိုင်းဆေး၊ မြန်မာဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး၊ ဆေးရွက်၊ ရိုးရာကုထုံးများ၊ ဆေးမတည်.ခြင်းများကို မေးမြန်းရသည်။.
Past Medical History PMH – ယခင်က အလားတူ ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ အခြားဖြစ်ဘူးသော ရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ခံရခြင်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ခြင်း၊ ဆေးရုံတက် ကုသခံရခြင်းများ စသည်တို.ကို မေးမြန်းရသည်။ ယခင် ဆေးမှတ်တမ်းဟောင်းများသည် ရောဂါ ရှာဖွေ၊ ကုသရှာတွင် အလွန် အရေးပါပါသည်။.
Social History SH – မွေးရပ်၊ လက်ရှိ နေထိုင်ရာ နေရာ၊ အိမ်ထောင်စု ဦးရေ၊ အိမ်ထောင် အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် သုံးစွဲခြင်း၊ ထမင်းစားသုံးမှု ပုံစံ အစရှိသည်တို.ကို မေးမြန်းရသည်။.
Family History FH – မိသားစုဝင် သို.မဟုတ် အတူနေ သို.မဟုတ် အိမ်နီးချင်းများတွင် အလားတူ ရောဂါဖြစ်ခြင်း ရှိမရှိ၊ ယခင်က ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ မိသားစုဝင်များတွင် အခြား မျိုးရိုးလိုက် ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ.
System Review – မေးမြန်းချိန်တွင် ကျန်ခဲ.နိုင်သည်. အချက်အလက်များကို မကျန်စေရန် တကိုယ်လုံး ခြုံငုံပြီး မေးမြန်းခြင်း နှလုံးနှင်. သွေးကြောဆိုင်ရာ၊ အဆုတ်နှင်. ဆိုင်ရာ၊ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းနှင်. ဆိုင်ရာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနှင်. ဆိုင်ရာ၊ ဦးနှောက်နှင်. အာရုံကြောနှင်. ဆိုင်ရာ၊ အခြား သတိမထားမိသော အချက်အလက်များ ကိုယ်အလေးချိန် လျော.သွားခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အလုံး၊ အကျိတ် စမ်းမိခြင်း.
လူနာအား စမ်းသပ်ရာတွင် ဆရာဝန် သို.မဟုတ် ကျန်းမာရေး စောင်.ရှောက်မှုပေးသူသည် အမြင်၊ အကြား၊ အထိ အတွေ.၊ အနံ.အာရုံ စသည်တို.ကို အသုံးချရသည်။ အခြေခံ စမ်းသပ်မှုတွင် အဆင်. ၄ ဆင်.ရှိသည်။ ကြည်.ရှုခြင်း inspection၊ ကိုင်တွယ် ထိတွေ.ခြင်း Palpation, အသံကို မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရန် လူနာကိုယ်ပေါ် လက်ချောင်းတင်ပြီး ထိုလက်ချောင်းကို အခြားလက်တဖက်ဖြင်. ခေါက်ခြင်း Percussion, နားထောင်ခြင်း Ascultation တို.ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်သည်. ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းပေါ် မူတည်ပြီး အစီအစဉ်ကွဲပြားခြင်း ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ - အရိုးအား စမ်းသပ်ရာတွင် ကြည်.ခြင်း look, ကိုင်တွယ်ခြင်း feel, လှုပ်ရှားခြင်း move ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားသည်။
အထက်ပါ အခြေခံ စမ်းသပ်မှုဖြင်. အောက်ပါတို.ကို စမ်းသပ်ရသည်။
အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ vital signs - ကိုယ်အပူချိန် temperature, သွေးပေါင်ချိန် blood pressure, သွေးခုန်နှုန်း pulse, အသက်ရှူနှုန်း respiratory rate, သွေးထဲရှိ အောက်စီဂျင် ပမာဏ oxygen saturation.
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းနှင်. အဆုတ်ဆိုင်ရာများ.
အသားအရည် နဲ. လက်သည်းများ.
လူနာ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ သတိရှိ သလား၊ ရူးနေသလား စသည်.
ဆီးလမ်းကြောင်းနှင်. မျိုးပွား အစိတ်အပိုင်းများ.
ဦးနှောက်နှင်. အာရုံကြောဆိုင်ရာများ သတိလစ်နေလား၊ အမြင်အာရုံကောင်းလား၊ အာရုံကြော ကောင်းလား စသည်.
ဗိုက်နှင်. အစာလမ်းကြောင်း ကိုယ်ဝန်ရှိက ကလေးအခြေအနေ.
ခေါင်း၊ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း.
လူနာ တကိုယ်လုံး ခြုံကြည်.ခြင်း - လူနာ၏ အရပ်အမောင်း၊ အလေးချိန်၊ အသားဝါနေခြင်း၊ ဖြူဆုတ်နေခြင်း စသည်.
ကြွက်သားများ၊ အရိုးအဆစ်များ၊ ခြေလက်များ.
စမ်းသပ်ရာတွင် လူနာအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်သည်များကိုသာ စမ်းသပ်သွားနိုင်သည်။
လိုအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းပို. စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာ ဓာတ်မှတ် ရိုက်ခြင်းတို.ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးချက်များကို မူတည်ပြီး လူနာ ဖြစ်ပွားနေသော ရောဂါကို ရှာဖွေရသည်။ စစချင်း ရောဂါကို အတိအကျ မသိရှိနိုင်ပဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရောဂါများကို သတ်မှတ်ရလေသည်။ ထို.နောက် တဆင်.ပြီး တဆင်. ဖြစ်ပွားနေသော ရောဂါကို သိရှိအောင် ကြိုးစားရလေသည်။
ကုသခြင်းတွင် ဆေးပေးခြင်း၊ စောင်.ကြည်.ခြင်း၊ လိုအပ်သည်. ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများကို ထပ်မံလုပ်စေခြင်း၊ အထူးကု ဆရာဝန်ဆီသို. လွှဲပေးခြင်းတို. ပါဝင်သည်။ ရက်ချိန်းပေး ပြန်လည်ကြည်.ခြင်း ပြုလုပ်သင်.ပေသည်။ ကုသမှုခံယူရာတွင် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားခြင်းများ ရှိသကဲ.သို.၊ ရှုပ်ထွေးသော ရောဂါများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်သော ဆိုးဝါးသောရောဂါများ ကို ကုသရာတွင် လနဲ.ချီ ဆေးရုံတွင် ကုသခံရခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ပိုင်း ရက်ချိန်း ပြန်ပြမှုများတွင် အထက်ပါအချက်များကို အကျဉ်းချုံးပြီး မေးမြန်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ လက္ခနာသစ်များ မေးမြန်းခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အထူးကုသို. လွှဲပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။